Leonardo Bonucci oo si xiiso leh uga hadlay Álvaro Morata kahor kulanka xulalka Talyaaniga iyo Spain – Gool FM
Leonardo Bonucci oo si xiiso leh uga hadlay Álvaro Morata kahor kulanka xulalka Talyaaniga iyo Spain
Dajiye July 5, 2021
(London) 05 Luulyo 2021. Daafaca kooxda Juventus iyo xulka qaranka Talyaaniga ee Leonardo Bonucci ayaa si xiiso leh uga hadlay weeraryahanka reer Spain ee Álvaro Morata, kahor kulanka xulalka Italy iyo Spain ay ku wada ciyaari doonaan Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020, habeen dambe ee Talaaladada ah Wembley Stadium.
Leonardo Bonucci ayaa oo la hadlay warbaahinta ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu si xiiso leh uga hadlay weeraryahanka reer Spain ee Álvaro Morata, wuxuuna yiri;
“Morata waa saaxiib weyn, waxaan waqti fiican kusoo wada qaadanay magaalada Turin, aad ayaan uga qiirooday wixii uu la kulmay ee ah dhaleeceyn iyo hanjabaad.”
“Isla waxaas ayaa igu dhacay aniga sidoo kale waan ogahay waxa ay la micno tahay markaan aqrinayo waxyaabaha noocaas ah, waxaan ahay dhiniciisa, waa wiil weyn, aabe weyn, Saaxiib weyn iyo ciyaartoy.”
“Morata waa weeraryahan dhameystiran, waxaan u arkaa inuu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka, nasiib ayaan ku leeyahay inaan saaxiib ku nahay hal koox, bari waan ka taxadareynaa isaga iyo dhamaan ciyaartoyda Spain.”
Si kastaba ha ahaatee, wareegii siddeed dhamaadka, Bonucci wuxuu xadiday qatarta Romelu Lukaku gabi ahaanba wuxuuna isku dayi doonaa inuu sidaas oo kale ku sameeyo Álvaro Morata, isagoo arrintaas ka hadlaya ayaa wuxuu yiri:
“Álvaro Morata iyo Lukaku waa weeraryahano waa weyn, marka aad wareegan ka gaarto tartanka, waxaad wada kulmeysaan dhamaan weeraryahanada ugu xoogan, Alvaro wuu ka duwan yahay Lukaku aniga oo ixtiraam buuxa u hayo Romelu, waana inaan diirada saarnaa faahfaahinta.”
Nicolas Anelka oo fariin adag u diray weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé
Capello oo uga digay Talyaaniga qaab ciyaareedka Spain kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan Semi-finalka koobka Euro 2020